ဟိုက်ရာဘဒ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
Standing Buddha in abhya mudra
17°24′56″N 78°28′30″E﻿ / ﻿17.41556°N 78.47500°E﻿ / 17.41556; 78.47500ကိုဩဒိနိတ်: 17°24′56″N 78°28′30″E﻿ / ﻿17.41556°N 78.47500°E﻿ / 17.41556; 78.47500
၅၈ ပေ (၁၈ မီတာ)
၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂
Buddha Purnima Project Authority, HMDA
ဟိုက်ရာဘဒ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် ကျောက်ဖြင့် တည်ထားသော ရုပ်ပွားတော် ဖြစ်သည်။ ထိုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်သည့် ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရုပ်ပွားတော်များတွင် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ဖြစ်သည်။
၂ မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခြင်း
ဟိုက်ဒီရာဘဒ်သည် Telangana ပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၃ နှင့် ၁၉၈၉ ကြားတွင် N. T. Rama Rao သည် Andhra Pradesh ၏ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ သက်တမ်းကာလတွင် ဒေသ၏ နိုင်ငံရေး၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတို့နှင့် ဆိုင်သော ရုပ်တုများကို တည်ဆောက်ရန် ငွေပမာဏများစွာ သုံးစွဲခဲ့သည်။ သူသည် နယူးယောက်သို့ အလည်အပတ်သွားရာတွင် လေဘာတီရုပ်တုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါ သူသည် ရုပ်ပွားတော်ကို ပြုလုပ်ရန်ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ "ကျွန်တော် ထိုရုပ်တုကဲ့သို့သော ဟာမျိုးလုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ် ...... အဲဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြောခဲ့သည်။ 
Rama Rao သည် ဂေါတမဘုရားရှင်ကို ဖော်ပြကာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူ၏ ရွေးချယ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဗုဒ္ဓသည် လူသားချင်းစာနာမှု ရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် လေကအမှန်တရားများကို လူသားများ နားလည်အောင် ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်သည် ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူသည် အချိန်ကြာကြာ ရှာဖွေမှုများ ပြလုပ်ပြီးသည့်အခါ ဟိုက်ရာဘဒ် အပြင်ဘက် ၄၆ ကီလိုမီတာရှိ Raigiri, Bhongir(Nalgonda District) တွင် အဖြူရောင်နှမ်းဖတ်ကျောက်တုံးကို တွေ့ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် NTR က တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကျော် ကြာချိန်တွင် ရာနှင့်ချီသော လုပ်သားများသည် ဘုရားကျောင်း၏ ဗိသုကာလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်သူဖြစ်သည့် S.M.Ganapathi Sthapati သည် ရုပ်ပွားတော်ကို တည်ဆောက်သည်။ ငါးနှစ်ကြာသေအခါ ရုပ်ပွားတော်သည် ၅၈ ပေ (၁၈ မီတာ) ပြီးစီးခဲ့သည်။ အလေးချိန်သည် ၃၅၀ တန် ရှိသည်။  အသုံးစရိတ်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်း ကုန်ကျခဲ့သည်။  ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အောက်ခံခုံသည် ၁၅ ပေ(၄.၆ မီတာ) ရှိသည်။ ယခုအခါတွင် Rock of Gibraltar အဖြစ် ရည်ညွှန်းကြသည်။  မြို့တော်ရှိ လမ်းများကိုလည်း ချဲ့ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် Andhra Pradesh အစိုးရကို N. T. Rama Rao က ဦးဆောင်ကာ ဖြုတ်လိုက်သည်။ နောက်နှစ်တွင် ရုပ်ပွားတော် တည်ထားကိုးကွယ်ရန် အသင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ABC ကုမ္ပဏီသည် ရုပ်ပွားတော်ကို ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အောက်ခံခုံနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့ရန် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ နောက်တွဲယာဉ်များကို အသုံးပြုကာ ရုပ်ပွားတော်ကို Hussain Sagar ကမ်းစပ်သို့ ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်သမားများသည် ရုပ်ပွားတော်ကို ဝမ်းပြားရေယာဉ်ပေါ်သို့ ရွေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၀၀ ကိုက် (၉၁ မီတာ) ခန့် ရွေ့ပြောင်းပြီးနောက် ရုပ်ပွားတော်သည် ကန်ထဲသို့ ကျသွားခဲ့သည်။  ထိုမတော်တဆမှုကြောင့် လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ 
ဆယ်ယူမှုများကို ၂-နှစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်ပွားတော်ကို ကန်ထဲမှ ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။  ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုပ်ပွားတော်ကို အောက်ခံခုံပေါ်သို့ အောင်မြင်စွာ ထားရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဒလိုင်းလားမားသည် ရုပ်ပွားတော်အား လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 
နေဝင်ချိန်တွင် ရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးမြော်ရပုံ, Hussain Sagar
ရုပ်ပွားတော်၏ မြေအောက်ခန်းရှိ ရုပ်တုများ
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ Coll, Steve။ "Buddha of the Lake Bottom"၊ The Washington Post၊9April 1990။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 September 2015။ – via HighBeam Research (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ ၂.၀ ၂.၁ "Up from the bottom"၊ The Boston Globe၊ 19 April 1992။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 September 2015။ – via HighBeam Research (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Raje, Abhishek။ "Ram Charan Teja shoots at iconic Buddha statue"၊ The Times of India၊ 23 January 2012။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3January 2013။
↑ Goldberg, Kory., Décary, Michelle.(2012), "The South: Hydrabad" , Along the Path: The Meditator's Companion to the Buddha's Land, Pariyatti Publisher, p.372. ISBN 1938754034 , 9781938754036
↑ "10 drown as the statue of Buddha takesadip"၊ New Straits Times၊ 11 March 1990။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Buddha Statue Sinks Barge, Drowning 10"၊ St. Louis Post-Dispatch၊ 11 March 1990၊ pp. 13A။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Buddha statue consecrated"၊ The Hindu၊3January 2006။9September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟိုက်ရာဘဒ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်&oldid=652646" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။